SKU: 6157-87-5. Category: ndị ọzọ na-
Ọbara arọ: 330.465
Ụdị Trestolone Acetate powder (CAS 6157-87-5) a na-atụle dịka ụzọ kachasị mma maka steroid steeti anabolic mgbe ọdịdị dị iche iche ga-eweta nsonaazụ kachasị mma. Ekwesiri ighota na onodi ogwu bu isi. Onye ọ bụla nke na-eji Trestolone Acetate ntụ ntụ kwesịrị ịgbaso ntuziaka usoro ọgwụgwọ iji leta ya iji gbochie mmetụta ọjọọ. Ngwá usoro ziri ezi ga-eweta nsonaazụ kachasị dị irè mgbe ejiri ya mee ogologo oge.
AAS raw na-enye 98% ọcha Trestolone Acetate / MENT raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ma ọ bụ oral ojiji.
Uzo ntụ ntụ Ezi ntụziaka: